I-Boron Nitride Ceramicabakhiqizi nabahlinzeki | XTL
Ikhaya > Imikhiqizo > I-Boron Nitride Ceramic
I-insulation kagesi enhle kakhulu kanye ne-thermal conductivity yenza i-BN ibe usizo kakhulu njengesisetshenziswa sokushisa kuzinhlelo zokusebenza ze-elekthronikhi ezinamandla amakhulu. Izakhiwo zayo ziqhathaniswa kahle ne-beryllium oxide, i-aluminiyamu oxide, nezinye izinto zokupakisha ze-elekthronikhi, futhi kulula ukusebenziseka kalula komumo nobukhulu obufunwayo.
Ukuzinza kwezinga lokushisa kanye nokumelana okuhle nokushaqeka okushisayo kwenza i-BN ibe yimpahla efanelekile ezindaweni ezinokushisa okuphezulu ezifana nemishini yokushisela i-plasma arc, amawafa omthombo wokusabalalisa, kanye nemishini yokukhula yekristalu ye-semiconductor.& ukucubungula.
I-BN ayiphili, inert, ayisebenzi ngosawoti we-halide nama-reagents, futhi ayimanziswa yizinsimbi eziningi ezincibilikisiwe nama-slags. Lezi zici, ezihlanganiswe nokunwetshwa okushisayo okuphansi, ziyenza ilungele izinto ezisetshenziswayo ezisetshenziswa ezinqubweni zensimbi encibilikisiwe ehlukahlukene.
I-High Pure MAX.99.99% PBN Pyrolytic Boron Nitride Ceramic ring
I-PBN Coating Pyrolytic Boron Nitride Ceramic1.Ukuhlanzeka kufika ku-99.99%, indawo eminyene, ukucinana komoya2.Amandla okushisa aphezuluI-PBN ihlanzekile kakhulu (99.995%) i-ceramic yobuchwepheshe, ifakwe kumamomo akhululekile (iziphambano) kanye nezingubo kugraphite kusetshenziswa inqubo yeChemical Vapor Deposition (CVD). Ukwakheka kwekristalu yale ceramic engeyona enobuthi kangangokuba kukhombisa izinga eliphezulu le-anisotropy eshisayo evumela ukukhula kwekristalu nezinye izinhlelo zokusebenza.
I-Boron Nitride Bn Evaporation Boat Crucible for Aluminium Metallization
Ukunikezwa kwefekthri I-Boron Nitride Bn Evaporation Boat, ithangi lokuhwamuka kwe-Boron nitride, ipani yokuhwamuka kwe-boron nitrideI-Boron Nitride Bn Evaporation Boat, yonke inqubo ye-vacuum hot pressing sintering yenziwa ngaphansi kokuvikelwa kwe-vacuum ne-inert gesi. Inqoba isenzakalo sezinto ezingavuthiwe ezigqwalile, zihlukaniswa futhi zisuswe emazingeni okushisa aphezulu esikhathini esidlule, iqinisekisa isimo sezulu esishisayo esishisayo, futhi ikhuthaza isikebhe sokuhwamuka esinokuqina okuhle kwamakhemikhali ngemva komkhiqizo osuphelile.
Pyrolytic Boron Nitride (PBN) Ceramic Plates
I-Fine Machinability Pbn Coating Pyrolytic Boron Nitride Ceramic Plate Disc Ring Bushing For HeaterI-PBN ihlanzekile kakhulu (99.995%) i-ceramic yobuchwepheshe, ifakwe kumamomo akhululekile (iziphambano) kanye nezingubo kugraphite kusetshenziswa inqubo yeChemical Vapor Deposition (CVD). Ukwakheka kwekristalu yale ceramic engeyona enobuthi kangangokuba kukhombisa izinga eliphezulu le-anisotropy eshisayo evumela ukukhula kwekristalu nezinye izinhlelo zokusebenza.
I-Pyrolytic Boron Nitride Crucible Pbn Ceramic Crucible Mbe Crucible
I-Pyrolytic Boron Nitride Crucible Pbn Ceramic Crucible Mbe CrucibleUkuhlanzeka kufika ku-99.99%, indawo eminyene, ukucinana komoyaAmandla okushisa aphezuluI-PBN crucible ingasetshenziswa ekwenzeni ama-semiconductors ancibilikayo ezitsheni zokushisa okuphezulu kwe-metallurgy, izingxenye ze-semiconductor ezisusa ukushisa ukushisa, ama-high-temperature bearings, ama-thermowells kanye nokwakhiwa kwengilazi kuyafa, njll. Ingasetshenziswa kabanzi kuma-electronics, metallurgy, amakhemikhali. , amandla e-athomu kanye ne-aerospace.
I-Boron nitride ceramic tube rod, eyaziwa nangokuthi i-graphite emhlophe, inesakhiwo esifanayo ne-graphite. Inokufakwa kahle kukagesi, i-thermal conductivity, ukumelana nokushaqeka okuhle kakhulu kokushisa kanye nokuzinza kwamakhemikhali.I-Boron Nitride Ceramic Products ecindezelwe okushisayo enehexagonal ene-hexagonal, ibonisa inhlanganisela eyingqayizivele yamakhemikhali, ugesi, imishini kanye nezindawo ezishisayo, okuyenza ifanelekele uhla olubanzi lwezicelo zezimboni ezisebenza kahle kakhulu. isixazululo esisekelwe ezinhlotsheni zezidingo zamakhasimende embonini.